‘कान्छी’ को गीतः चरीचट्ट परीमा दयाहाङ र स्वेता
कात्तिक १७, २०७४
काठमाडौं, १७ कार्तिक – चलचित्र ‘कान्छी’ को नयाँ गीत नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । चरीचट्ट परी बोलको गीतमा दयाहाङ राई र स्वेता खड्काको अभिनय रहेको छ ।
राजनराज शिवाकोटी र अन्जु पन्तको स्वर रहेको गीतमा राजनराज शिवाकोटीको शब्द र संगीत रहेको छ ।
आकाश अधिकारीले निर्देशन गरेको चलचित्रमा दयाहाङ राई, स्वेता खड्का, अनु शाह, कामेश्वर चौरासिया, आशान्त शर्मा, भूमिका श्रेष्ठ, सुजल गिरी, नीर शाह लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । चलचित्रको कथा यम थापाले लेखेका हुन् भने पुरुषोत्तम प्रधानले छायांकन गरेका हुन् ।
कात्तिक १७, २०७४ मा प्रकाशित
हनीमूनबारे दीपिकाले यसो भनिन्
एउटा फिल्म खेल्दा कति कमाउँछन् भारतीय हिरो हिरोइन ?
कपिलले दिए विवाहको पार्टी, फोटो बन्यो भाइरल
राष्ट्र बैंकको जागिर छाडेर कलाकारिता : जसले दियो अभिनेत्री लक्ष्मीलाई सन्तुष्टि
प्रियंका चोपडाको विवाहमा कति भयो खर्च ?
‘चौका दाउ’ट्रेलरमा कमेडी नै कमेडी